သင်ဒီမှာပါ: Home / Burkina Faso များအတွက်မော်ကွန်း
အဆိုပါသဲကန္တာရထဲမှာ Holes တူးခြင်းအားဖြင့်သဲကန္တာရ Fight
23 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 22 မှတ်ချက်
Burkina Faso - ထို Zai နည်းလမ်းနှင့်အတူသဲကန္တာရထဲမှာတွင်းတူးဖော်ခြင်းအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောမြေများရှငျစတျောမူ။ သငျသညျအော်ဂဲနစ်နှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့နှင့်အတူဤအပေါက်တွေဖြည့်ပါ! ကောင်းပြီထက်နည်းနည်းရှိပါ! ငါသည်သင်တို့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်တွေ့ပါရစေပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Yacouba Sawadogo!
Filed under: သဲကန္တာရ Solutions အတူ Tagged: 400 မီလီမီတာ, 800 မီလီမီတာ, Burkina Faso